June 2021 – News543Online
शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना संतोष दाजु हजुरलाई3करोड नेपालीको आशीर्वादले छिटो निको होस।
June 30, 2021 adminLeaveaComment on शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना संतोष दाजु हजुरलाई3करोड नेपालीको आशीर्वादले छिटो निको होस।
सन्तोष देउजा लाई सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरौ।।। सन्तोष देउजा अहिले उपचार गराउदै हुनुहुन्छ। उपचार गर्नुभन्दा पहिले एउटा यस्तो स्टाटस लेख्नु भएको छ अन्ततः रोगसंग मेरो केहि लागेन। शल्यक्रियाका लागी चितवन स्थित CMC(चितवन मेडिकल कलेज) मा भर्ना भएको छु। आत्मबल उच्च छ। म चाडै उठ्नेछु। किनकी हजुरहरुको माया र आर्शिवाद मसंग छ। अहिले पछिल्लो […]
हैट क्षत्र साही नि कडा नै रहिछन पूरा भिडियो सहित हेर्नुहोस
June 30, 2021 adminLeaveaComment on हैट क्षत्र साही नि कडा नै रहिछन पूरा भिडियो सहित हेर्नुहोस
नेपालमा हरेक वर्षको असार १५ लाई धान दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ । यस दिन कृषकहरू आफ्नो धानखेतमा रोपाइँ गर्ने र दहीच्यूरा खाने गर्छन् । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा भने असार १५ लाई युवायुवतीहरूले ‘हिलो खेल्ने उत्सव’ को रूपमा सेलिब्रेट गर्न थालेका छन् । धान दिवसमा एउटा तस्वीर खुबै भाइरल भयो । तस्वीरमा दुई युवा-युवती हिलोमा […]
June 30, 2021 adminLeaveaComment on जतिसुकै बिजी भएपनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढिदिनु होला
प्युठान को नौबहिनी गाँउपालिका वडा न. १ स्याँउलिवाङ मा निर्माणधिन घर मध्यरात मा भ’त्किदा बोम ब. मल्ल सहित श्रीमती र अढाई वर्षिय छोरा ले एउटै ओछ्यानमा ज्या’न गु’माउनु पर्यो। सात सदस्य को परिवार मा जेठी छोरी मावल गएकी र बाँकी तिन छोरीहरु छुट्टै पल्लो कोठा मा सुतेका कारण बाँच्न सफल भएका हुन। गाँउपालिका द्वारा […]
June 30, 2021 adminLeaveaComment on गरिब परिबारमा जन्म लिएका ता,रा बिक को अवस्था मा,या हुनेले Ge,t w,ell s,oon लेख्नुहोला। (हेर्नुहोस भिडियो)
बाग्लुङ जिल्लामा जन्म लिएका तारा बिक को यो अवस्था देख्दा सबैका आँखा रसाउने गर्छ्न भर्खर को लाउ लाउ खाउ खाउ भन्ने यो उमेरमा तारा भने हिनडुल गर्न समेत गर्न सक्दैनन।। केही समय अघि उहाँको उपचारको लागि एक जना दिदी ले उहाँलाई काठमाडौं लिएर नि जानू भयो तर उपचार सम्भब नभएपछी उनी निरास हुँदै घर फर्किनु […]
June 30, 2021 adminLeaveaComment on पंखाको स्वीच थिच्ने क्रममा करेन्ट लागेर ४ वर्षीय किसनको मृत्यु
पंखाको स्वीच थिच्ने क्रममा करेन्ट लागेर ४ वर्षीय किसनको मृत्युसिरहा, लहान नगरपालिका(१७ गोविन्दपुर बस्ने देव कुमार दासको ४ वर्षीय छोरा किसन कुमार दासको करेन्ट लागेर सोमबार दिउँसो मृ त्यु भएको छ । आफ्नै घरमा पंखाको स्वीच थिच्ने क्रममा करेन्ट लागेर अशक्त भएका उनको उपचारको लागि अस्पतालतर्फ लैजाने क्रममा बाटोमै मृ त्यु भएको हो । […]
June 30, 2021 adminLeaveaComment on कुन्जना घिमिरेको जन्म दिन H.B.D लेखेर 1 share गर्नुहो
प्रिय कुन्जु ! जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना !! मेरो जीवनमा तिम्रो आगमनले सदैव खुसी ल्याएको छ । तिमी मेरो लागि माया, छहारी ,आँट अनि भरोसा हौ । तिमीले मेरो जीवनमा इँटा हैन विश्वासको पर्खाल लगाएकि छौ । दु:ख छेक्ने छानो छाउदै ममताको चौतारी बनाएर परिवारको जग बसाएकि छौ। तिम्रै मार्गदर्शनले हामीले लाखौँ करोडौं आफन्त कमाएका छौं […]
June 30, 2021 June 30, 2021 adminLeaveaComment on तपाईं ले सोचको ७ दिन मा पुरा हुनेछ फोटो मा छोएर OM लेख्नुहोस।
तपाईं ले सोचको ७ दिन मा पुरा हुनेछ फोटो मा छोएर OM लेख्नुहोस।शिवलिङ्ग हिन्दु देवता शिवको स्वरूप, प्रतिक वा निशान मानिने प्रतिमाविहीन चिह्न हो । शिवलिंगलाई सामान्यतः गोलाकार मूर्तितलमा राखिएको हुन्छ जसलाई योनी, पीठम् वा पीठ भनिने गरिन्छ । प्राय: जसो मानिसले शिवलिङ्ग भन्नाले शिवको लिङ्ग भनेर बुझ्दछन । लिंगको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक […]
June 30, 2021 adminLeaveaComment on पूर्व माओवादीहरुको गुनासो : डुबायो–डुबायो !
रामबहादुर थापा (बादल), टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापासहित एमालेमा रहेका पूर्वमाओवादीहरु केपी ओलीसँग नपाइने कुरा माग्दै दिन बिताइरहेका छन् । उनीहरुको माग छ, ‘पार्टीको नाम एमाले नै राख्ने कुराले हाम्रा साथीहरुमा अलिक समस्या आयो । यसलाई फेरौँ †’ केही दिनअघि ओलीसँगको भेटमा टोपबहादुरले त भने पनि, ‘हामीले देशलाई प्रचण्डमुक्त बनाउन चाहेका हौँ । त्यसैले सानातिना कुरामा […]
आमाको लास सडक छेउमा राखेर रुदै गरेका टुहुरा बच्चाहरु !! यदि तिमीमा प्रेम छ भने फोटो छुनुहोस् र R.I.P. लेख्नुहोस्
June 30, 2021 adminLeaveaComment on आमाको लास सडक छेउमा राखेर रुदै गरेका टुहुरा बच्चाहरु !! यदि तिमीमा प्रेम छ भने फोटो छुनुहोस् र R.I.P. लेख्नुहोस्
दु:खद दृश्य ,आमाको लास सडक छेउमा राखेर रुदै गरेका टुहुरा बच्चाहरु मन छुने तस्बिर यदि तपााईंसँग प्रेम छ भने यो Share गर्नुहोस् ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला यो तस्बिर india को सामाजिक संजाल बाट लिएकोहो।
June 29, 2021 adminLeaveaComment on विमान दुर्घ’टना भएको ३६ दिनसम्म पाइलट जिउँदै! गोही र सर्प भरिएको जंगलमा कसरी बाँचे ? हेर्नु’होस्
विमान दुर्घ’टनामा मृ’त्युलाई धो:का दिएका एक जना पाइलट गोही र सर्प भरिएको जंगलमा ३६ दिनसम्म जीवि’तै रहन सफल भएका छन् । गोही र सर्प भरिएको अमेजनको डर:लाग्दो जंगलमा दुर्घ टनाग्र’स्त भएको विमानका ती पाइलट एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म चराका अण्डा र जंगली फलफुल खाएर जीवित रहन सफल भए । बेपत्ता भएका ३६ वर्षमा एन्टोनि’यो सेनाको […]